Now Wajiga labaad ee loogu talagalay dadka magangalyo doonka ah: Guriga Soodhawaynta - Amjambo Africa
Now Wajiga labaad ee loogu talagalay dadka magangalyo doonka ah: Guriga Soodhawaynta
Waxay ku egtahay mudada la rabo in dadka magangalyo raadiska ah ay ka guuran Meesha ay dagan yihiin ugu dambeyn August 15-keeda. Sababta mudadaas ayaa ah mid ku qoran qandaraaska lagu heshiiyay. Arintaas oo aad u adag maxaa yeelay waxaa adkaanaya in lahelo guryo la awoodi kaasoo adkaanayay sanado badan guud ahaan gobolka Maine, magaalada Portland iyo hoggaamiyeyaasha bulshada ayaa isku duba riday isbahaysi adag si ay u helaan magangelyo doonayaashu guryo kuwaasoo yimid Maine laga bilaabo Juun 9.
Kristina Egan, Agaasimaha Guud ee Golaha Wakiillada Portland (GPCOG), ayaa isku dubariday isbahaysiga. Ms. Egan ayaa sheegay in shaqaalaheeda ay xooga saareen mashaariic kale oo ay ka mid tahay in ay diiradda saaraan xaaladdan adag ahana dagdaga ee ay kujiraan dadkan raadinaya magangalyada.
“Waan ku faraxsannahay in aan taas samaynno,” ayay tiri. Kooxda ayaa bilaabaysa “Hoyga Soodhawaynta”, hal arin oo muhiim ah oo kamid ah qorshaha dib udajinta waa inaan urarno qiyaastii 70 qoys oon geeyno guryo kiro ah illaa iyo labada toddobaad ee soo socda, iyo inaan rarno inta hartay marka guryaha qiimohoodu hoos udhoco dhammaadka xagaaga. ” inaan ugeyno “qoysas soo dhaweeya” kuwasoo siin doonaa dadkan magangalyo raadiska ah hoy kumeel gaar ah.
Barnaamijka waxaa iskudaba riday koox ka socota wada-hawlgalayaasha bulshada oo ay ka mid yihiin hoggaamiyayaasha dadka soogalootiga ah, ururrada diinta, wakiilada ka socda Magaalada Portland, CIEE, qaybta guryaynta ee Maine, Guryaha Avesta iyo Carla Hunt, Guriyaynta Compassionate ee Yarmouth. Hoggaamiyeyaasha dadka soo galootiga ah ee ku lug leh hirgelinta Hoyga Soodhawaynta waxaa ka mid ah Pious Ali, Deqa Dhalac, Papy Bongibo, Mufalo Chitam, Claude Rwaganje, Micky Bondo, Nsiona Nguizani, Baby Ly, iyo Claudette Ndayininahaze. Hogaamiyeyaashan waxay qayb wayn ka qaadan doonaan isku aadinta dadka magan doonta ah iyo qoysaska martigalin doona.
Tom Bell, Sarkaalka Warfaafinta Dadweynaha ee GPCOG, ayaa yiri, “Dadka samayndoona is ku aadinta qoysaska waa dad ay magangelyo-doonayaashu ay horey u yaqaaneen. Waa hoggaamiyayaasha dadka soo galootiga ah. Iyaga ayaana ah dadka lala xiriiri doono.
Qof kasta oo ku lug leh barnaamijka Guryaha Soodhawaynta waxaa ka go’an ilaalinta wanaagga dadka la martigalinayo iyo kuwa wax marti galinaya. Marka la dhamaystiro website u gaar ah arintaan waxaa ku jiri doontaa codsi loogu talagalay qoysaska wax maritgalinaya, iyo sidoo kale liiska waxyaabaha ay filayaan qoysaska wax martigalinaya – sida inay dadka martida ah ay helaan ogolaansho inay isticmaalaan jikada. Fursado tababarka dhaqanka ah ayaa lasiin doonaa qoysaska wax martigalinaya iyo magangalyo doonayaasha. Claudette Ndayinahaze iyo Micky Bondo, oo ah kuwo aasaasay ururka ayaa lawadaagi doona khibradooda ku wajahan tababarka dhaqankan.
“Waa in aan hubinnaa in qoysaska ka soo baxaya Expo ay leeyihiin hay’ad wax usharaxda si ay u ogaadaan Meesha ay ku socdaan, sidoo kalana usharaxda waxa ay dadka wax marti galinaya ay filayaan. Waana inay u sharaxaan dadka magan galyo doonka ah si loogu noqdo marti guryaha dadka Maraykanka ah ayay tiri ” Ms. Ayuu yiri Egan.
Heather Dallas, oo si weyn ula shaqeynayay in ka badan 800 oo magangalyo-doon ah oo yimid magaalada Portland muddo shan sano ah, ayaa sharaxday in xaga dhaqanka oo lafahmo ay muhiim tahay si uu uguulaysto barnaamijka Guryaha Martiyaynta. Waxay sheegtay in dadku ku nool yihiin guryaha si kala duwan, taasoo ku salaysan kooxba asalka ay kasoo jeedaan, iyo habdhaqanka dhaqameed. In la is barto ayaana caawin doonta in lagu wada noolaadu hal meel. “Qoysas badan oo ku nool Afrika waxay ku nool yihiin guryo laga dhisay dhagax wayna ku adagthay inay fahmaan guryo laga dhisay alwaax. Marka biyaha oo kudaadata dhulka waa arin caadi u ah. “Haddii aan loo sheegin – oo la tusin sababta – martidu ma ogaan karto tusaale ahaan in daahyada musqusha la dhex galiyo tube ka laguqubeysto.
Golaha Wakiillada Greater Portland waxay horay u heshay 115 codsi oo ka kayimi dad raba inay soo dhaweeyaan dadka magangalyo doonka ah ee haatan ku jira Guriga Expo ee Portland. taasina waxay ahayd ka hor intaan bogga internerka ee Guryaha Soodhawaynta aan la furin. Qaar ka mid ah codsiyadaasi waxay ka yimaadeen degaannada miyiga ee gobolka Maine, laakiin intooda badani waxay ka yimaadeen qoysaska Greater Portland. Waqtigan xaadirka ah, nidaamku wuxuu mudnaanta siin doonaa qoysaska raba inay wax marti geliyaan kuwaas oo dagan magaalooyinka waaweyn. Sababtoo ah waxaa fududaan in magangalyo doonayaashu ay helaan gaadiidka dadwaynaha, meelo udhow oo laga dalbado caawimaada oo kuyaala magaalooyinka. Sidoo kale helitaanka adeegyada bulshada ee udhow meelaha ay kunool yihiin bulshada Africaanka ah eek u nool magaalada Portland.
Nsiona Nguizani, Madaxweynaha Angola Association of Maine, ayaa sheegay in caqabadda weyn ee magangelyo-doonayaashu ay noqon karto “go’doon, iyo cabsi laga qabo meel aan lagaranayn. Tani waa qeyb ka mid ah sababta bulshada soogalootiga ah ay uga shaqeyneyso si loo abuuro nidaam ugu dambeyntii ka shaqeyndoona gobolka Maine oo dhan, si looga hadlo caqabadaha bulsho ee la xiriirta magangalyo doonka ee meelaha baadiyaha ah ee gobolkan Maine. “Ilaa inta nidaamkan laga hirgalinayo, hogaamiyayaasha soogalootiga ayaa mudnaanta siinaya meeleynta qoysaska kuwaas oo laga rarayo Expo gurigeeda lana dajonayo degaanka Greater Portland.
In kastoo martigelinta magangaly-doonayaasha ay martigalinayaan qoysaska kunool miyiga aysan ku jirin qorshaha wakhtigan, tuulooyinka iyo magaalooyinka banaanka Portland waxay ubaahan yihiin inay kaalin ku yeeshaan xalalka muddada-dheer. Maareeyaha Magaalada Portland Jon Jennings ayaa yiri, “Magaalooyinka iyo tuulooyinka Maine waxa ka hoosbixi doonta inay u arkaan in dadkan cusub ay yihiih fursad lagu xoojiyo dhaqaalaha Maine iyo xoojinta shaqaalaheeda. Qoysaskani waxay kujoogaan halkan qaab sharciyaysan, waana kuwo xirfad leh oo tababaran, waxayna diyaar u yihiin inay wax ku kordhiyaan bushadan ay kusoo biireen.”
CIEE waxay sameyn doontaa muraajaco dhammaan codsiyada ka iman kara marti-geliyaha barnaamijka Home Hosts, muraajacadan biloowga ah waxaa ku jiri doona baarinaat lasoo baaro qofka wax marti galin doona. CIEE ayaa markaa siin doonta macluumaad hoggaamiyayaasha soogalootiga, kuwaas oo kashaqayn doona sidii la isugu aadin lahaa marida iyo kuwa soo dhawaynaya.
Guddoomiye Mills ayaa ku dhawaaqday July 18-keeda in ay khafiifisay xannibaadyada ku saabsan u-qalmitaanka caawimaada guud. Inkastoo lacagtu ay u ogolaanayso magangelyo-doonayaasha in ay helaan foojarrada guryaha, iibsashada raashinka, iyo daawooyinka, laakiin gurya la’aanta weli way sii jiri doontaa, sidaa darteedna waxaa sii jiri doona baahida loo qabo guryo kumeel gaar ah.
“Lacagta cusub ee (GA, caawimadda guud) waxba kama badalayso baahida loo qabo helitaanka guriyo ku meel-gaar ah,” Mr Bell ayaa cadeeyay. “Waxaa jira guryo la’aan ka jirta gobolka. Waxay qaadan doontaa waqti si loogu helo guri joogta ah qof walba oo jooga Expo. Guryaha ku meelgaarka ah ayaa loo baahan doonaa si loo helo hoy ku filan qoysaska ilaa iyo inta magaalada, Avesta Guryaha, ay diyaarinayaan guryo joogto ah ”
Joby Thoyalil, falanqeeye Siyaasadda Sare ee Maine Equal Justice, ayaa ka digtay oo tiri, “Waxaa jira qaybo hoos hoose oo farsamadeed oo ku saabsan xeerka cusub kaasoo ay ubadan tahay inuu kahor istaagi doono dadka caawimaadda xitaa haddii ay u qalmaan sharci ahaan. Tusaale ahaan, qof Maraykanka ku imaaday fiise dalxiis laakiin fiisihii waqtigiisii uu dhamaaday, qofkan oo wali kashaqaynaya siduu uheli lahaa codsiga magangalyo. Qofkan uma qalmi karo caawimaadda guud marka la eego sharciga cusub, inkastoo sharciga gobolka uu dhigayo inuu xaq uleeyay GA.
Ka sokow miisaaniyadda GA, da Magaalada ayaa uruurisay qiyaastii $ 815,000 oo ah deeq taasoo qayb ka ah ololaha lacag-ururinta si loo caawiyo kharashaadka magangalyo-doonayaasha. Qoysaska marti galin doona uma baahna inay ku bixiyaan dhaqaale martidooda. Magangelyo-doonayaasha waxay heli doonaan foojarro ay ku bixiyaan kharashyada maalin kasta, xitaa hadii aanay lacag ka helin GA da.
“Tani waa fursad aad u wanaagsan oo uu heli doono gobolka Maine,” ayuu yiri Egan. “Dadkani waa kuwo awood leh, karti leh. Waxaa lawada ogyahay in dadka cusub ay dhisaan ganacsiyo ayna sookordhiyaan dhaqaale meel kasta oo ay degaan. Waxaan u baahannahay inaan helno guryo ladajin karo dadkan cusub. Maine waxay ubaahan tahay dhammaan noocyada kala duwan ee dadka imanaya ee magangalyo doonka ah, iyo sidoo kale dadka ka yimid Massachusetts, dadka ka yimid California – waxaanan u baahanahay guryo la awoodi karo si ay usuuro gasho in dadkaasi yimaadaan gobolka Maine. ”
Nsiona Nguizani wuxuu u hadlayay dad badan markii uu yiri, “Nolosheenna macno yeelan mayso illaa aan go’aansano inaan la wadaagno dadka kale. Inaan ka mid noqdo kooxda soo dhaweynaysa magangalyo-doonayaasha ayaa ah mid ka mid ah waxyaabaha ugu fiican ee noloshayda isoomara. ”
Hadaad raboto inaad magacaaga ku qorto xogta macluumaadka ee loosameeyay dadka raba inay soodhaweeyaan qoysas, isticmaal emailkaan email: [email protected]
PreviousRamadan: a special month for Muslims in Maine